Miasa miaraka Amin’ny Ashoka ny Global Voices Amin’ny Fifaninanana Fampitam-baovao an’olotsotra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Aogositra 2011 13:50 GMT
Vakio amin'ny teny Magyar, русский, 한국어, Français, عربي, Español, English
Tamin'ny revolisiona tao Tonizia sy Ejipta ary ny fihetsiketseham-bahoaka tao amin'ny tontolo Arabo tamin'ny lohataona (Bahrain, Yemen, Syria), hatramin'ny fahapotehana nateraky ny horohorontany tao Japana sy ny fikomiana tao Angletera vao haingana, tsy nitatitra fotsiny ihany ireo tantara vaovao nisongadina marobe niseho nandritra ny taona ny mpiserasera fa nitatitra ihany koa ny tranga manontolo tamin'ny tantara sasany azy ireo manokana.
Afapo tamin'ny fiaraha-miasa niaraka amin'i Ashoka Changemakers ny Global Voices tamin'ity taona ity tamin'ilay ‘Valantserasera: Fifaninana Zava-baovao Manerantany‘, izay tohanan'ny Google. Misy ny loka zaraina, ao anatin'izany ny vola 5.000 dolara Amerikana ho an'ny tetikasa fampitam-baovao an'olotsotra, raha manao izay mampiavaka ny momba anao amin'ny alalan'ny fampitam-baovao ianao, te hahare vaovao avy aminao izahay.
Miasa amin'ny serasera
Mazava tokoa fa ny momba ny fahefana ao an-toerana no tena hain'ny valantserasera, saingy maro manerantany -indrindra ao amin'ny firenena mandroso sy ny faritra atao ankilabao – no tsy afaka mampiasa teknolojia izay ahafahana mandray anjara amin'ny serasera. Ny sivana ihany koa, no tena mampatahotra amin'ny fidiran'ny olona amin'ny sehatry ny fampitam-baovao an'olotsotra sy ny valantserasera, fantatra fa mankasitraka ny andraikitra afaka sahanin'izany fitaovana izany amin'ny fanentanana ny hetsika sosialy sy ny fientana-miasa ny governemanta sy ny manam-pahefana hafa .
Fampitam-baovao an'olotsotra ao Guinea Bissau. Sary avy amin'ny Rising Voices ao amin'ny Flickr (CC BY-NC-SA 2.0).
Raha tsy mitodika amin'ireo vina ireo, dia mbola eo am-pikarakarana ny famokarana fampitam-baovao manerantany sy mampiasa ny serasera mikasika ny fikasana izay misy fiantraikany amin'azy ireo sy ny tanànany ireo mpitondra zava-baovao.
Ashoka dia fikambanana iraisam-pirenena niorina tamin'ny taona 1980, nirotsaka amin'ny fitarihana ny mpandraharaha ara-tsosialy -olona manana hevi-baovao sy mora ampiasaina kokoa mba hamahana ny olana ara-tsosialy ny fikambanana. Ny tetikasany Mpanova [Changemakers] dia fikambanana an-tserasera manerantany miasa amin'ny fanohanana ny asa fanovana ara-piarahamonina amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny fokonolona sy fitarihana ny mpikambana .
Ny fifaninanana dia misokatra ho an'ny olona rehetra manerantany, izay manova ny fomba fifandraisan'ny olona sy ny fidirany amin'ny vaovao sy fampahalalam-baovao. Afaka manantena handrombaka ny loka iray amin'ireo efatra 5000 Amerikana ny mpandresy, izay famatsiam-bola maharitra mba hampandrosoana ny tetikasany, ary azo lazaina ho Naman'ny Ashoka ihany koa ianao, izay mahazo vatsim-piainana mandritra ny telo taona sy fidirana ao amin'ny tambazotran'ny mpandraharaha ara-tsosialy.
Aoka ho Mpanova !
Tsotra ny fidirana – jereo ity horonantsary ity na jereo tsikelikely ireo fampianarana eto ka raiso izany alohan'ny 14 Septembra 2011. Azo atao amin'ireto tenim-pirenena manaraka ireto ny fisoratana anarana: Anglisy, Frantsay, Espanola, Portiogey, Arabo, Thai, Indoneziana, Mandarin na Japoney.
Tsy voatery ho mpisera aterineto ianao – misokatra amin'ny hevitra izay mifandraika amin'ny resaka fifandraisana na teknolojian'ny fampahalalam-baovao ny fifaninana. Jereo ity ambany ity raha te hahafantatra bebe kokoa momba ny fidirana amin'ny fampahalalam-baovao an'olotsotra avy amin'ny mpiara-mpamorona ny Global Voices, Ethan Zuckerman, resadresaka nataony niaraka tamin'ny Mpanova [Changemakers], na tadiavo koa ny fampahalalam-baovao an'olotsotra misy ny tetikasa fanentanana ao amin'ny Rising Voices.